Yinde kangakanani leyo inyanga egcwele emhlabeni?
Abantu abaningi bakhathazekile ngendlela egcwele ihlala futhi sithinta ukuthi umuntu uxhumana. Ososayensi baye babonisa ukuthi zonke izigaba kwenyanga: ezikhulayo, kwenyanga, esezokufa - ihlala izinsuku eziyisikhombisa. Kubandakanya inyanga egcwele. Kuthathwa phakathi lwenyanga enqunywa ngokuthwasa kwenyanga. Lesi yisikhathi lapho sibona isibhakabhaka egcwele ukukhanya ebandayo round ibhola.
Inyanga egcwele nemizwelo
Kwakuphakathi nalesi sikhathi, kubalulekile ukuthola isicelo efanele amandla, kungenjalo kungaholela ubudlova ezingalindelekile nechilo. By the way, izibalo yezokwelapha zibonisa ukuthi kule ngxenye inyanga kwandisa isibalo zomgwaqo. Mhlawumbe kungcono ngenxa yokuthi abantu abaningi ngalesi sikhathi kukhona abanenkinga yokuqwasha? Ukuze umuntu oyedwa iyinkinga, futhi waba ayinandaba, ezibuza: '? Kanjani izinsuku eziningana ihlala inyanga egcwele ". Elinye lithi ngisho sijabule ngokuthi wayengafuni ukulala, ngoba ngalesi sikhathi ungenza, ngaphandle kokuphazamiseka ezinye izinto.
By endleleni, kwafika isikhukhula esisabekayo wamandla umcabango elichumayo zenzeka ngesikhathi esithile kusukela abaculi, abaculi kanye abalobi. Kungani-ke kwenzekani? Abacwaningi bakholelwa ukuthi edilingene eshintsha ngemuva ngokomzwelo lomuntu - ezingeni lakhe okuqonda nezindlela ukuhlola isimo. izimo zokucabanga okubangelwa isifo ngalesi sikhathi, njengoba umthetho, futhi esebenzisa isihluku.
Ungayiphendula ngokushesha, indlela isikhathi esiningi ihlala egcwele. Kujwayele ukuthatha isonto elilodwa. Esigabeni lesi, umuntu egcwele amandla namandla. yobushoshovu kwaKhe Selilonke, ufuna akusebenzisa ngokunenzuzo.
Ukuthi baziphathe kanjani?
Inyanga egcwele icacisa zonke izici ezinhle nezimbi ubuntu. Sahlanganisa zonke walo uthi. Kanjani ukusizakala kule isigaba kwenyanga, ukugwema imiphumela emibi?
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi edilingene - kulokhu izinto azifezile ezinhle! Ngakho-ke, uma une into entsha benethemba ikusasa lesikhathi eside esingathembela, kubalulekile ukuba esebenzayo nje edilingene ihlala.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lezo zindawo ukuthi zihlobene ubugagu. Kukholakala ukuthi ngalesi sikhathi inyanga uzokwazi ukuheha abantu abaningi kakhulu. Nge impumelelo ngenxa kuyoba nezethulo, izingqungquthela nemicimbi efana. Ikakhulukazi uma kuziwa emisha, okwatholwa ukubonakaliswa onobuhle ezintsha ka izimoto, amafoni noma amakhompyutha.
Uma sikhuluma umsebenzi kwi-Inthanethi, egcwele, umsizi ophelele kulabo bekwi ukuthuthukiswa sites, ubhala ematheksthi noma processing image ku-Photoshop. Kafushane, abantu yokudala bayozuza uma ubonisa intshiseko lapho inyanga egcwele.
Futhi ngalesi sikhathi kukhona ukubukeka okusha izinto ajwayelekile. Ngokwesibonelo, uma umculi isikhathi eside hhayi ungathola leyo nto esithombeni sakhe, isandla ngokwayo kuzokwenza canvas oyifunayo unhlangothi. Futhi abalobi ungaqedela usuqaliwe incwadi, futhi abaculi - ukuqamba ingoma entsha. Siphetfo: unyezi iyingxenye ebalulekile zonke izici lokusungula futhi likhuthaza ugqozi okungazelelwe.
I full moon futhi imvelo
Abanye abalimi amateur ngempela yokubuka ikhalenda kwenyanga. Abagxeki Okuxakayo uyobahleka, kodwa izazi zezinkanyezi vumela ukuziphatha okunjalo. Ngemva kwenyanga is hhayi Kunconywa ukuba utshalwe kabusha, ukusika futhi kuwo, noma kamuva ungaba unpleasantly Emangazwe yilo iqiniso ukuthi ekuqaleni amahlathi ashwabene noma baba sibi ukuthela izithelo. Kungcono ukubona ekhalendeni, kanjani isikhathi esiningi ihlala egcwele, bese ulinda ngaphandle kwesikhathi okungekuhle.
Kodwa ukuqoqwa amakhambi okwelapha ngalesi sikhathi, kunalokho, is ezifudumele. Zonke amandla okuphulukisa okuyinto zanqwabelana isitshalo amaqabunga inflorescences, ifinyelela lokuhlala okusezingeni eliphezulu, futhi ukusetshenziswa kwazo izifo ezihlukahlukene zizosebenza kakhulu. Kilomlayo jikelele yilona mandrake kanye ginseng. Kungcono ukuba angamthinti ke, ngenxa edilingene amandla lezi zitshalo iyancipha.
Kusukela inhliziyo sijabule kakhulu kubadobi. Phela, ngaphansi kwethonya izibani ebusuku like inhlanzi izona kuze kube ogwini. Futhi uma yokuyengela - kuzoba nje catch ezinhle!
Uthando, umlingo kanye nemali
Lapho Moon Naughty ngesibindi ubheke ngaphandle efasiteleni ukuze ethandekayo, ke kuphakamisa kubo kuze ewubuciko kakhulu Isayensi Isilingo. By the way, izingane wakhulelwa lapho inyanga egcwele okukhulu ngaphezu kwanoma isiphi esinye isikhathi. Ababhula Ngezinkanyezi bathi iplanethi ebusuku ngokuvamile uvuza isipho osanda kuzalwa clairvoyance.
Ekugcineni, phakathi nale nkathi zenyanga Sebawoti ephelele ukubhula ahlukahlukene, ukusebenzelana nemimoya Sensei nezinye rites imilingo. Kukholakala ukuthi ngesikhathi Inyanga egcwele umehluko phakathi ulwazi real kanye nangale thins futhi ezingaqondakali kulula ukungena ezweni lethu. Vele kufanele uqaphe futhi uthathe zonke izinyathelo zokuvikeleka, noma izivakashi ezivela emhlabeni parallel ungahlala ne silwane. Zibandakanye wamasiko imilingo kungaba kakhulu ngendlela yokugcina Inyanga egcwele.
Uma sikhuluma ngokungadingekile ngezinto ezibonakalayo, umjikelezo kuchaziwe - isikhathi esikhulu ukuqeda ukuntuleka imali nokuheha inhlanhla zezimali. Kodwa akukho Kunconywa ukuboleka imali - ukubuya kungenzeka maduze. Enye into - uma umuntu kwakudingeka usizo lwezimali, khona-ke edingekayo ukuze sisize umuntu. Nokho, kufanele lokhu kwenziwe ngobuqotho. Okunjalo esiza abantulayo liyadingeka ukubalwa, futhi umama Moon uyoziphonsa umuntu ophanayo amathuba yemali - ethembisa ngaphezulu.
Inyanga egcwele futhi ubuthongo
Ngubani ukuthi isimo akusho, lapho ebheka efasiteleni inyanga iyona imbangela yokuqwasha? Uma ungomunye walaba bantu, kusho ukuthi abathintekayo ngu izibani ebusuku. babe Ngempela ahlupheke ngenxa yokuntuleka ukulala kakhulu ngendlela benyanga ngokugcwele? Ochwepheshe induduzo: kukhona isixazululo!
Ngaphambi edilingene Kunconywa ukuba kukhawulwe uketshezi eyanele kanye okunamafutha ukudla.
Gwema ubuka umabonakude izindaba ezingezinhle.
Kuyadingeka ukuba ibe aminyene (mhlawumbe black) umthunzi bese uvale iwindi wakhe ekamelweni lokulala.
Manje ungakwazi bazitike amaphupho futhi asikho isidingo sokuthi bakhathazeke ngokuthi maningi kangakanani amahora ihlala inyanga egcwele, futhi ukulala ngalesi sikhathi kanjani.
Kulesi sihloko sahlanganisa ingxenye kuphela ulwazi mayelana izivakashi ngobusuku obubodwa. Moon uyohlale uhlupho umqondo abantu hhayi nje eqagela ngokuthi singakanani edilingene ihlala futhi ukuthi wesabe kulomkhakha. indima ebalulekile eyadlalwa ekuphileni lomuntu. Ingabe wabonisa yakhe emnyama ohlangothini uhlamvu noma wenze ukutholakala ewusizo emphakathini.
Kuvunguza kwama-hormone "Mirena": Uhlolojikelele, yokusetshenziswa, ukubunjwa, ukusebenza, kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza plastic ketshezi ngezandla zakho siqu? Ubuchwepheshe ukwakhiwa kanye isicelo izindlela